Where Shall We Keep Those Baskets? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Where Shall We Keep Those Baskets?
ခြင်းတွေကို ဘယ်မှာ ထားကြမလဲ
ချင်းတိုင်းရင်းသားထဲက ဘဝတွင် ပထမဆုံး စတင် သိကျွမ်းဖူးသည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်သည် မန္တလေးမြို့မှ အမှတ် ၉ အထက တစ်ဖြစ်လဲ စိန့်ပီတာ ကျောင်းတွင် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား နေနေခိုက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားနေသော အဆောင်တွင် ထိုချင်းတစ်ယောက်နှင့် သိကျွမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အသက်မှ ဆယ်နှစ်သားသာသာပင် ရှိသေးသည်။ သူက ကျွန်တော့်ထက် တစ်တန်းလား မသိ၊ ကြီးသည်။ ပုဆိုးနှင့် ခပ်ရိုးရိုးအေးအေးဟု မှတ်မိနေသည်။ နာမည်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ချေ။
မည်သို့ဆိုစေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က မန္တလေးတွင် ချက်မြှုပ်သော်လည်း ၄၆ ရက်သား အရွယ်ကတည်းက ကယားပြည်နယ်၏ ဝေးလံသီခေါင်သော ကျေးလက်တွင် လူလားမြောက်ခဲ့ရသဖြင့် ကယားတွေ၊ ပအို့တွေ၊ ရှမ်းတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ဖြစ်သလို သည်မတိုင်ခင် တစ်နှစ်၊ လေးတန်း ကျောင်းသားဘဝတုန်းကလည်း တောင်ကြီးမြို့မှ အမှတ် ၃ အထက တစ်ဖြစ်လဲ စိန့်အဲ(န်)(ဇ်)ကျောင်းတွင် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား နေခဲ့သည်ဖြစ်ပြန်ရာ အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့် လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့ဖူးပြီဖြစ်သဖြင့် ထိုချင်းကို ချင်းဟုပင် မမှတ်ခဲ့မိဘဲ ကျွန်တော်နှင့် ဘဝတူ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်သာ စိတ်ထဲမှာ ရှိခဲ့ပါသည်။
နောက်တစ်နှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ ကျွန်တော် ရောက်လာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားများထက် တရုတ်၊ ကုလားအနွယ်ဝင် သူငယ်ချင်းတွေ ရလာသည်။ သို့သော် ရှမ်းပြည်နယ်မှ လာရောက်ကျောင်းတက်သူများနှင့်မူ အဆက်မပြတ်သလောက်။
၁၉၇၆ခုနှစ်၊ ကျွန်တော် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် တက်နေခိုက်မှာ ဖခင်ကြီး ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း အငှားယာဉ်မောင်းသမားဘဝသို့ နေ့ချင်းညချင်း ရောက်သွားသည်။ ကျွန်တော့်အငှားယာဉ်က ပရိုက်ဗှိတ် တက္ကစီခေါ် ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့် အငှားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဘဝမှာ နောက်ထပ် ချင်းတစ်ဦးနှင့် ဆုံရပြန်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော် ဂိတ်ထိုးသည်မှာ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်ရှိ ပလီကြီးအောက်မှာ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အလယ်လမ်းထဲရှိ လေးထပ်တိုက်တစ်တိုက်တွင် ထိုချင်းက နေသည်။ အသားညိုညို၊ ထောင်ထောင် မောင်းမောင်း၊ ဂိုက်ဆိုက် ကောင်းကောင်းနှင့် မျက်နှာထားတည်တည် ဖြစ်သည်။
သူက ကျွန်တော့်ကားကို ငှားစီးလေ့ရှိသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်သူသည် ကျွန်တော့် ဖောက်သည်ဖြစ်လာပါသည်။ ဖောက်သည်ဖြစ်လာသောအခါ သူက ကားခကို အကြွေးထားတတ်လာသည်။ သည်လိုနှင့် တဖြည်းဖြည်း အကြွေးတွေ များလာသောအခါ သူ ပျောက်သွားသည်။ သူ့အိမ်ကို ကျွန်တော် သိသော်လည်း သွားမတောင်းခဲ့ပါ။ သူနှင့် လမ်းတွင် အမှတ်တမဲ့ဆုံသော်လည်း သူက ကျွန်တော့်ကို မမြင်ဟန်ဆောင်သွားသည်ချည်းသာ။
ကားသမားဘဝကို စွန့်လွှတ်လိုက်ချိန်အထိ ထိုကားခ အကြွေးများကို ကျွန်တော် မရတော့ချေ။ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်ကျော်က သူ့ကို တစ်နေရာမှာ ဆုံသည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို မမှတ်မိတော့ပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ မျက်နှာ မြင်တော့ ရစရာရှိသည့်အကြွေးတွေကို မှတ်မိနေသေးသော်လည်း ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ဆိုတာကို မမှတ်မိတော့ပြီ။ ထို့အတူ တောင်းဖို့လည်း စိတ်ကူး မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော့်ဘက်က ဆပ်ရန်ရှိသော သံသရာကြွေးကို ပေးဆပ်လိုက်သည်ဟုသာ အောက်မေ့ထားလိုက်ပါပြီ။
တတိယချင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မှ လာသော အစ်မတစ်ယောက် ခေါ်လာသော ချင်းမလေးဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော့်မှာ အဆိုတော်ပိုးက ကပ်ငြိနေသည်။ တေးသီးချင်း တစ်ခွေစာတောင် ထုတ်ပြီးခဲ့လေပြီ။ မိန်းကလေးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြင့် တွဲလိုသဖြင့် ထိုအစ်မက သူ့အဆောင်မှ ချင်းမလေး တစ်ယောက်ကို ခေါ်လာပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အသံကောင်းသည်။ အဆိုတတ်သည်။ သမ်းလျှင်ပင် သူသမ်းသည့် အသံက တုန်ခါနေလောက်အောင် အဆုံးသတ် အသံတုန်ခါမှုများကို ကောင်းစွာ လုပ်နိုင်သော ချင်းမလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်ကို မှတ်မိနေသည်။ သို့ရာတွင် သူနှင့် ကျွန်တော် ဘာသီချင်းမှ မဆိုဖြစ်ခဲ့ပါ။
၁၉၉၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဩစတြေးလျသံရုံးမှာ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအဖြစ် ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်သည်။ ကျွန်တော့်ထက် လပိုင်းစောပြီး အလုပ် ဝင်နှင့်နေသည့် စီးပွားရေးတာဝန်ခံမှာ ချင်းလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့ နာမည်က “ဟရမ်အုတ်။”
ကျွန်တော်နှင့် ရုံးခန်းချင်းကပ်လျက်။ ဆယ်နှစ်နီးပါးခန့် သူနှင့် ကျွန်တော်တို့မှာ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအတွင်း မမြင်ချင့်အဆုံး နေခဲ့ရသည်။ အနှီ “ဟရမ်အုတ်”သည် ရယ်စရာလည်း ကောင်းလှသလို စိတ်ပျက်စရာလည်း အတော်ကောင်းသူဖြစ်သည်။ သူ့ကို အကြောင်းပြုပြီး “ချယ်လူလင်း” ဟူသော ဝေါဟာရက ကျွန်တော်တို့ ပါးစပ်ထဲတွင် စွဲလာသည်။
သူသည် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် တတိယအတွင်းဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် သံတမန်လောကမှ လာသူ ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် သူသည် သံတမန်ဆန်ဆန် နေတတ်ထိုင်တတ်သူမျိုး ဖြစ်သင့်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့ မြင်ထားသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ဟရမ်အုတ်သည် သူ သံတမန်ဆန်ချင်သည့်အခါတွင် အလွန် သံတမန်ဆန်တတ်သလို ရိုင်းချင်ပြီဟေ့ ဆိုသည်နှင့် ရိုင်းဖို့လည်း တစ်စက်မှ ဝန်မလေးချေ။
သူသည် ကျွန်တော့်ကို မင်းနှင့် ငါနှင့် တွယ်ချင်သည့်အခါ တွယ်သည်။ သူနှင့် ကျွန်တော်မှာ တစ်ရုံးတည်းသား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်းဖြစ်သော်လည်း မင်းနှင့် ငါနှင့် ပြောလောက်အောင် ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တော့ မဟုတ်ချေ။ တစ်ရုံးလုံးက ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၄-၅-၁၀ နှစ်ကြီးသူများပင် ကျွန်တော့်ကို မင်းနှင့်ငါနှင့် မပြောကြသော်လည်း ဟရမ်အုတ်ကတော့ ထင်သလို ထထ လုပ်တတ်သည်။
အရွယ်ချင်းကလည်း တကယ့်ကို မတိမ်းမယိမ်း။ သည်မှာက ရယ်စရာ တစ်ကွက်ရှိသည်။ အစက သူ့ကို ကျွန်တော့်ထက် တစ်နှစ်ငယ်သည်ဟု ကျွန်တော် နားလည်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က ၁၉၅၇ ခုနှစ်ဖွား၊ သူက ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖွားဟု ဆိုခဲ့ပေသကိုး။
နောက်ပိုင်းကျမှ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးယူသောအခါ သူလည်း ၁၉၅၇ ခုနှစ်ဖွားဖြစ်နေသည်။ ဘာဖြစ်လို့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖွားလို့ ပြောရတာတုံးဟု ဆိုသောအခါ သူက ဒီဇင်ဘာလမှာ မွေးတာဖြစ်သဖြင့် ဟိုဘက်နှစ်နှင့် ကပ်နေသောကြောင့် ပြောရခြင်းဖြစ်သတဲ့။ ကိုင်းဗျား… ဟုတ်လည်း ဟုတ်တဲ့ ချယ်လူလင်းဟုသာ ဆိုရတော့မည်ဖြစ်သည်။
သူ့လိုသာဆိုရင်ဖြင့် ၁၉၅၇ နိုဝင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှာ မွေးသော ကျွန်တော်လည်း ၁၉၅၈ ဖွားဟုသာ ပြောရန်ရှိလေသည် မဟုတ်တုံလော။
သေချာ တွက်စစ်လိုက်သောအခါ သူသည် ကျွန်တော့်ထက် တစ်နှစ်မဟုတ်ဘဲ ရက်ပိုင်းမျှသာငယ်သော ချယ်လူလင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
၂၀ဝ၀ပြည့်နှစ်လောက်တွင် သူ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ အလည်သွားမည် ဆိုကာ ရုံးမှ ခွင့်ယူသွားသည်။ ထို့နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ထွက်စာ လှမ်း တင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နျူးယော့(ခ်)မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးတွင် ဝင်အလုပ် လုပ်နေသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
အင်း… ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖွားဟု တွင်တွင် ပြောတတ်သော ၁၉၅၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဖွား ဟရမ်အုတ်နှင့် တွေ့နေကြပေတော့မည်။
ဟရမ်အုတ်နှင့် သိကျွမ်းနေခိုက်မှာ နောက်ထပ် ချင်းတစ်ယောက်ကို သိရပြန်သည်။ သူက ဩစတြေးလျသံရုံးနှင့် ကပ်လျက်တွင် ရှိသော ဗြိတိသျှ သံရုံးမှ စီးပွားရေး တာဝန်ခံဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်က “လျံခမ်းခိုင်“တဲ့။ ဗလ ကောင်းကောင်း၊ အရပ်ပြတ်ပြတ်၊ အသားဖြူဖြူ၊ ခေါင်းပြောင်ပြောင်၊ မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်း။
ထူးဆန်းသော ချင်းဟု ဆိုရမည်။ သူကား လုံးဝ စကားမဝဲ။ မြန်မာစကားကို အညာလေဖြင့် ပြောသဖြင့် သူ့ကို ထူးဆန်းသော ချင်းဟု သမုတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ လူက အလွန်လူရည်လည်သည်၊ တဝါးဝါးတဟားဟားနှင့် ပွဲကျအောင် ပြောတတ်၊ သောတတ်သည်။ ကျွန်တော့်နှယ် ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာသမားဟု ဆိုသော် ရမည်။
သူသည် ထိုအလုပ်မှာ သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ စိတ်ထင် ၄-၅ နှစ်ခန့်မှာ ထိုအလုပ်က သူ ထွက်သွားသည်။ နောက်ပိုင်း သူ့ကို ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဟိုတွေ့ သည်တွေ့။ တွေ့တိုင်း ရယ်ရယ်မောမော၊ သောသော ရွှင်ရွှင်။
ကျန်ချင်းတွေကတော့ ပရိသတ်အဖြစ် သိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး ကျွန်တော့်ကို စွဲမှတ်မိစေသူမှာ အဆိုတော် ချောစုခင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ချောစုခင်မှန်း မသိခင်ကတည်းက ကြော်ငြာက သီချင်းတစ်ပုဒ်မှ သူ့အသံကို အမှတ်ထင်ထင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အဆိုနှင့် ကောင်းလိုက်တဲ့ အသံအားဟု စွဲမှတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ ဆုန်သင်းပါ(ရ်)။ သူကလည်း အဆို ကောင်းသလို အသံကလည်း ထူးခြားသည်။ သူ့သီချင်းတွေကို ကျွန်တော် ကြိုက်လာသည်။
နောက်တစ်ယောက်က သက်မွန်မြင့်။ သက်မွန်မြင့်ကတော့ ကျွန်တော် ကြိုက်သည့်အထဲမှာ မပါပါ။ သူ့အရပ်ကြီးက ကလန်ကလားဟု ထင်သည်။ သူ့အလှကလည်း ကျွန်တော့်ကြိုက်သည့် မင်းသမီးအလှမျိုး မဟုတ်။ သို့သော် ထိုသက်မွန်မြင့်ကို စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏ၏အိမ်မှာ အမှတ်မထင် တစ်ခါ ဆုံဖူးသွားသည်။ အဲတော့ သူ၏ ရိုးသား ဖြူစင်သော အပြောအဆို အနေအထိုင်လေးကို သဘောကျသွားခဲ့ပါသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို အကြောင်းပြုပြီး အနှီ သက်မွန်မြင့်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးလာရသောအခါ သူ့ကို ပိုချစ်သွားသည်။ သူကား ပကတိ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို ဖြူဖြူစင်စင်၊ သွက်သွက်လက်လက်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာ ဘရိတ်ကီဖြစ်သည်။ ဘရိတ်ကီ့ကိုလည်း မြင်ကတည်းက ထူးခြားသော သူ့အသွင်နှင့် ထူးခြားသော ဆိုပေါက်၊ ခြေဟန် လက်ဟန်များကြောင့် အမှတ်ထင်ထင်ရှိခဲ့သည်။ သူက သရုပ်ဆောင် ဝါသနာလည်း ရှိပုံရသည်။ သို့သော် မြန်မာကား သိပ်ကြည့်လေ့ မရှိသည့် အတွက် သူ့သရုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျွန်တော် သိပ်မသိပါ။ သူ့အဆိုကိုသာ ပိုပြီး စွဲမှတ်နေခဲ့ပါသည်။
ဩစတြေးလျသံရုံးကို စွန့်ခွာခဲ့သည့် ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စကားပြန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘာသာပြန်အဖြစ်လည်းကောင်း အဆင်ပြေသလို ချီကောက်လိုက်သည့်အလုပ်ကို ကျွန်တော်လုပ်နေခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထက်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။
ထိုအတွင်း အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှာ ချင်းတွေကို စွတ်ကယ်စွတ်ကယ် တွေ့ရသည်။ အများစုမှာ ကော်လာဖြူဝန်ထမ်းများ၊ အရာရှိများဖြစ်သည်။ တချို့က နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်၊ တချို့က သတိထားဆက်ဆံရမည့်အထဲမှာ ပါသည်။ ဒါတော့ ချင်းတိုင်းရင်းသားမှ မဟုတ်ပါ။ လူမှန်သမျှ နှစ်ဖိုဖွယ် ကောင်းသည့်သူ၊ သတိထား ဆက်ဆံရမည့်သူဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိနေသည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည်ပင်လျှင် သတိထားဆက်ဆံရမည့် လူစားမျိုးဟု တချို့က သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူ ဖြစ်သည်။
ထိုချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့ တစ်ဦးစီ စာမဖွဲ့လိုတော့ပါ။ ထိုအထဲမှ သင်တန်းနှစ်ခုတွင် တွေ့ခဲ့ရသော ချင်းလူငယ်လေးနှစ်ဦးကမူ ကျွန်တော့် အတွက် အမှတ်ထင်ထင်။ တစ်ယောက်က မျက်နှာချိုချို၊ လူပုံချောချော၊ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် လူရည်လည်သူဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ ခန့် ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ယောက်က မြန်မာစကားပင် ကောင်းကောင်း မရေလည်သေး။ လူကလည်း ၂၀ ကျော်သာ ရှိသေးသည်။ သို့သော် သူ့မှာ သိချင် တတ်ချင်စိတ် ပြင်းပြနေသည်။ သင်ယူလိုစိတ်ကလည်း အပြည့်။ အပြင်ပန်းကြည့်လျှင် သူသည် ဘာသိဘာသာ နေတတ်သော်လည်း အတွင်းကျကျ ပေါင်းကြည့်သောအခါ သူသည် အရာရာကို စူးစမ်းလေ့လာ သင်ယူမှတ်သားလိုသည့် အလားအလာရှိသော လူငယ်တစ်ဦးအဖြစ် သိလာရပါသည်။
ဒါက ကျွန်တော် သိခဲ့သော ချင်းတွေကို တန်းစီ ချပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ချင်းတွေနှင့် ဆုံတိုင်း ဘတ်(စ်)ကားပေါ်တွင် ယာဉ်နောက်လိုက်များ ပြောလေ့ရှိသော စကားဖြင့် ကျီစယ်လေ့ရှိပါသည်။ “ခြင်းတွေကို ခြေထောက်ကြားမှာ ထားရင် ထားပါ၊ ခုံအောက်ကို ထိုးရင်ထိုးပါ၊ ပေါင်ပေါ် မတင်ကြပါနဲ့”ဟူသတည်း။
အမှန်တော့ ခြင်းတွေကို ခြေထောက်ကြားမှာ ထားရမှာလား၊ ခုံအောက်ကို ထိုးရမှာလား၊ ပေါင်ပေါ်ကို တင်ရမှာလား၊ ခေါင်းပေါ်မှာ ရွက်ရမှာလား ဆိုသည်ကို ယာဉ်နောက်လိုက်က ဆုံးဖြတ်ရမည် မဟုတ်ပေ။ ခြင်းထဲတွင် ဘာပါသည်ဆိုခြင်းကသာ ထိုခြင်းကို ဘယ်မှာထားသင့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးနေမည်သာဖြစ်ပါသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်းတွေ ထည့်ထားသော ခြင်းသာဖြစ်ပါက ခုံအောက်ကို ထိုးတန် ထိုးရပါလိမ့်မည်။ သို့တည်းမဟုတ် သာမန် အိမ်သုံး ပစ္စည်းအထွေထွေကို ထည့်ထားသည်ဆိုကလည်း ခြေထောက်ကြားမှာ ထားချင် ထားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အဲ… အနည်းငယ် တန်ဖိုးကြီးသော ပစ္စည်းတွေ၊ စိန်ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေ ထိုခြင်းထဲမှာ ပါလာပြီဆိုသည်နှင့် ထိုခြင်းကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ရင်ခွင်ထဲ ပိုက်တန် ပိုက်ရပါတော့မည်။
ထိုကမှ တစ်ဆင့်တက်ကာ ဘုရားဆင်းတုလို၊ ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူဆူလိုကို ခြင်းနှင့် အကျအန ထည့်လာမည်ဆိုပါမူ ထိုခြင်းကို ခေါင်းပေါ် ရွက်တန် ရွက်ရတော့မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ကြိမ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထန်းခေါက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပလတ်စတစ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းက အရေးမကြီးပါ။ ထိုခြင်းထဲမှာ ပါလာသော ပစ္စည်း အမျိုးအမယ် (ဝါ) အနှစ်သာရက ထိုခြင်းကို ဘယ်မှာထားမလဲ ဆိုခြင်းအတွက် ပဓာနကျသော အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် မြင်ပါသည်။
ကျွန်တော် တန်းစီပြခဲ့သော ချင်းတိုင်းရင်းသားများမှာလည်း လူတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုချင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော် ခင်သော ချင်းတွေ ရှိသလို ကျွန်တော် လန့်သော ချင်းတွေလည်း ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကို အကျိုးပြုသွားသော ချင်းတွေ ရှိသလို ကျွန်တော့်ကို လူပေါ်လူဇော် လုပ်သွားသော ချင်းလည်း ပါသည်။
ထိုချင်းတွေမှာလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ဟားခါးချင်း၊ တီးတိန်ချင်း၊ ဖလမ်းချင်း၊ ဇိုမီးစသဖြင့် အစုံဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ခြင်း၊ ကြိမ်ခြင်း၊ ဝါးခြင်း၊ ထန်းခေါက်ခြင်းများကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုချင်းတွေထဲမှာ နျူးယော့(ခ်)မြို့အထိ ရောက်နေသော ချင်းလည်း ပါသည်။ ဩစတြးလျနိုင်ငံမှာလည်း ချင်းတွေ ရှိသည်။ ရန်ကုန်က ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလည်း ချင်းအရာရှိ ကြီးကြီးမာစတာတွေ ရှိသည်။
တချို့ချင်းတွေက ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား။ တချို့ချင်းတွေက လေးလေး နက်နက်နှင့် သင်ချင်တတ်ချင်စိတ် ပြင်းပြင်းပြပြ။
ဒါလည်း ချင်းတိုင်းရင်းသားမှ မဟုတ် လူတိုင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုရောအခါ ခြင်းတွေကို ဘယ်မှာထားမလဲဟု ဆုံးဖြတ်သည့်အခါတွင် ဘာခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းထက် ခြင်းထဲတွင် ဘာပါသလဲဆိုခြင်းကသာ အခရာဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသားချင်းလူမျိုးတွေကို ဘယ်မှာ နေရာပေးသင့်သလဲဟု စဉ်းစားရာတွင်လည်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အသီးသီးအခြားခြား ကွဲပြားနေမှုက ပဓာန မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်း၊ အားထုတ်မှုနှင့် အနှစ်သာရများကသာ အခရာ ဖြစ်သည်ဟု မြင်မိရပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း မန္တလေးမှာ မွေးကာ ကယားပြည်နယ်မှာ လူမှန်း သိခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန္တလေး၊ ရန်ကုန်စသည့် ဒေသများတွင် ကျောင်းနေခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်ကား တစ်ဦးတည်းသောသား။ မိဘကလည်း လူလတ်တန်းစား၏ အောက်ဆုံးအလွှာမှာသာ ရှိခဲ့သည်။ သူလို ငါလို ကျောင်းနေပြီး သူလိုငါလိုပင် ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသူသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်တော့်အတွက် စာပေနယ်မှာ နေရာလေး တစ်နေရာ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ကြားတွင် နာမည်လေးတစ်ခု၊ နိုင်ငံတကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လည်း နာမည်သေးသေးလေးတစ်ခုတော့ ရှိနေပါသည်။
ထိုနေရာလေးတွေ၊ ထိုနာမည်လေးတွေအတွက် ကျွန်တော့်ဘာသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ မှေးမှိန် ချို့ငဲ့သော ကျွန်တော့် နောက်ခံဘဝကို တွန်းအားအဖြစ် အသုံးပြုလျက် ကျွန်တော့်အတွက် တစ်နေရာကို ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျားကုပ် ကျားခဲ ကြိုးစား ရယူခဲ့ရပါသည်။
အမေနှင့် အဖေတို့ တစ်လလျှင် ရက် နှစ်ဆယ်ခန့် ရန်ဖြစ်ကာ နေချင်စရာ လုံးဝ မကောင်းလှသော အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုများကြားတွင် လူလားမြောက်ခဲ့ရသော ကျွန်တော့်အတွက် ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာ ဘိန်းစား၊ အရက်သမား၊ ကလေကလွင့်ဖြစ်သွားရန် သိပ်မခက်ပါ။ ထို့အပြင် ၁၉ နှစ်သား အရွယ်မှာ အတတ်စုံ တတ်စေနိုင်သော လမ်းပေါ်နေ၊ လမ်းပေါ်စား အငှား ယာဉ်မောင်းသမားဘဝကို ရောက်ရှိခဲ့ကာ ထိုဘဝထဲတွင် ၆ နှစ်တာမျှ နေခဲ့ရသည့်အတွက် အဖျင်းဆုံးတော့ ကျွန်တော် အရက်သမား ဖြစ်နေလောက်ပါသည်။
ထိုဘဝမှာ ငွေရလွယ်ပါသည်။ ပေါ့ပါးပါသည်။ လွတ်လပ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဘဝကို အဆုံးဟု ကျွန်တော် မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်နေရာဟုလည်း စကတည်းက မခံယူမိပါ။ ထို့ကြောင့် သစ်မရခင် စပ်ကြား ပေါင်းကွပ်သည့်ဝါးဟုသာ ထိုဘဝမှာ နေခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက်လည်း ယနေ့ ကျွန်တော် ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသော လူနေမှု အဆင့်အတန်းတစ်ရပ်၊ ဘဝ အခြေအနေ တစ်ခု၊ မိသားစုဘဝ တစ်ခု၊ နာမည်တစ်လုံးကို ရလာခဲ့ပါသည်။
ယခု ကျွန်တော့်စာကို ဖတ်နေသူ လူကြီးမင်းသည်လည်း ချင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမည်။ မြန်မာတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်ပါမည်။ အခြား တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဦးလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
မည်သူပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ “ခြင်းတွေကို ဘယ်မှာထားမလဲ”ဆိုသော ကျွန်တော့်ခေါင်းစဉ်နှင့် တွဲဖက်ကာ ကျွန်တော် ပါးလိုသော သတင်းစကားကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားကြည့်မည်ဟုတော့ ကျွန်တော် မမှိတ်မသုန် ယုံပါသည်။
“နေရာ”ဟူသည်မှာ သူများက ပေးမှ ရလာသော အရာဟု ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာဖွေ၊ စူးစမ်း၊ ဖန်တီးယူရသော အရာဟုသာ ဘဝပေးအသိဖြင့် ကျွန်တော် သိထားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော့်အသိ၊ ကျွန်တော့်အတွေး၊ ကျွန်တော့်အမြင်ကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှကြည့်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အသိ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေး၊ ကိုယ်ပိုင်အမြင်များ မုချမသွေ ရှိနေပါလိမ့် မည်။ ကျွန်တော့်စဉ်းစားပုံကို လက်ခံလိုက လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ပယ်ချလိုက ပယ်ချနိုင်ပါသည်။ လက်ခံပါဟု တိုက်တွန်းနိုင်သည့်အား ကျွန်တော့်မှာ မရှိပါ။ တိုက်တွန်းဖို့ ဝေးစွ၊ မေတ္တာရပ်ခံရန်ပင် ကျွန်တာ့်ပင်ကိုဗီဇက ကျွန်တော့် ကို ခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်တော်ပြောတာ သဘာဝကျ မကျ၊ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် တစ်မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်ကြမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ကျွန်တော် သည်စာကို ရေးရကျိုး နပ်လေပြီဟု ခံယူနေမိမည်သာဖြစ်ပါတော့သတည်း။
ချင်း စာ/ယဉ် ကော်မတီ (တက္ကသိုလ်များ ရန်ကုန်)က ကော်မီတီအတွင်း ကန့်သတ်ထုတ်ဝေတဲ့ ချင်းမဂ္ဂဇင်း အမှတ်စဉ် ၁၀ အထူးထုတ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 27 February 2010 16 January 2013 Categories Reproduction, Thoughts
2 thoughts on “Where Shall We Keep Those Baskets?”
27 February 2010 at 5:53 pm
I’m pretty much impressed by your hilarious and imaginative writing style! Keep up your good work. 😀
13 October 2016 at 4:10 pm
ဒီစာသားကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ။”ကျွန်တော့်ဘက်က ဆပ်ရန်ရှိသော သံသရာကြွေးကို ပေးဆပ်လိုက်သည်ဟုသာ အောက်မေ့ထားလိုက်ပါပြီ”ဆိုတာလေးပါ။အောင်မောင်းလဲ လစာနဲ့မလောက်ငှလို့ အငှားကားလေး ပြေးပြေးမောင်းတုန်းက ကားခမပေးဘဲ လစ်သွားတဲ့လူ ကြုံရဖူးတယ်။ ငှားတာကအသွားအပြန်ဆိုတော့ ယုံတာပေါ့။ ကားသမားပါးမှမဝတာကိုး။
Previous Previous post: A Thing Scarier Than Death
Next Next post: May All Forms of Discrimination Be Eliminated!